A3 T-Shirt Printer Guangzhou China Manufacturer
Kurukurirana neAshambadzi? Supplier
Taura ikozvino Bata Mutengesi
Tsanangudzo:T-Shirt Printer Guangzhou,Dtg A3 T-Shirt Printer,T-Shirt 3d Printer
Foni Yenyaya Case Printer
USB Printer Flash Disk
Itafura yeVV yakafuridzirwa
Home > Products > Digital Printer > T shirt Printer > A3 T-Shirt Printer Guangzhou
A3 T-Shirt Printer Guangzhou
USD 3300 - 4300 / Set/Sets
 Taura ikozvino
Muenzaniso Nha.: RF-A3 T
Packaging: Case Case
Kubudirira: 300 set/month
Nzvimbo Yokutanga: Shenzhen, China
Kupa Mazano: 300 set/month
Certificate: CE, FCC, ROSH, SGS
A3 T-Shirt Printer Guangzhou :
Our factory factory in Shenzhen, near Guangzhou. T-Shirt Printer Guangzhou, tinogona kutumira ku Guangzhou. Tine mutsva uye shanduro yekuti iwe usarudze. Uyu Dtg A3 T-Shirt Printer inoita logo pane t-shirt, machira nemakotoni. Kana uri kuisa bhizinesi rako idzva, ndapota usazeza kuonana neni nokukurumidza. Isu tafekitari, hapana chikonzero chokufunganya pamusoro pehutano,
Rega ndikugadzirire iwe:
1. Tongotenga shati imwe chete inodhura madhora USD5.00 pasina logos kana mifananidzo.
2. Shandisa printer yedu kudhinda, mari inosvika USD0.08.
3. Kutengesa kunze kwe USD15.00 zvishoma. Iwe unogona kuzviona iri bhizimisi rakanaka kwazvo.
Iyi T-Shirt 3d Printer inoshanda nyore, yakagadzikana kushanda. Zvingave muitiro wakajeka, mavara akazara mavara kana kusanganisa maitiro, kungozvinyora kamwe chete, pasina chidimbu chekuita firimu nemitambo yakawanda.
iyo inonzi inkjet yakadhindwa yakagadzirwa ne-high-tech yedhijhini yekushandisa michina inoshandisa chinhu chisingafambidzani, iyo inoshandiswa inzvimbo yakawanda kwazvo, iyo inyanzvi mune zvishandiso muzvigadzirwa zvemaoko, mhando dzakawanda dzekutumira kushandura, chinyorwa chekunyora magetsi. Nhengo isina chikonzero inochengetedza mushure mekudhinda, inogona kuchengetedza munhu, kana mushure mekunyorwa kwakanyatsonaka, kunopesana nekupfeka, kupera, kunwa doro, mvura isina kuchena; hazvizogadziri musoro wepamusoro kana iwe usingashandisi mishonga 1 mwedzi, mari inodhura yakazara. Inonyatsoziva pfungwa yechokwadi yechinhu chimwe chete chinyorwa, pasina kubatiza, chizere chemufananidzo wakave wakapera. Zvichienzaniswa nemasikirwo emichina ekudhinda, RFC digital Quick Fast T shati Printer inokubatsira kuti uchengetedze kubudiswa kwechinyorwa, kupfidza kwekushisa kwemhepo uye dzimwe tsika dzakawanda dzekuita mapepa, inopedzisa kuburikidza nekuderedza kwekodhi yemuvara, iyo inyanzvi inogadzira kushandiswa kwemichina, kuderedza mari yekushanda, kushandiswa kwemari yakaderera, kukwidziridzwa kwepamusoro, kusaderera kwepamusoro, zvakagadzirwa zvepamusoro zvakagadziriswa zvechokwadi! Iyo inogona kubuda muvara wemufananidzo wechinhu pane zvinhu zvose, zvinotapira, zvisingagadziri, zvisingaregi, zvisingaiti kubata, rusununguko rwemavara, rumwe rudimbu rwekupindira uye zvimwe zviitiko kuti kukurumidze kushandiswa kwedhijidhi mubhizimusi rokudhinda, kukura kwekugadzirwa kwakakwana uye 100% mushure mekutengesa basa.
Printing Technology: 6 ruvara Micro Piezo inkjet teknolojia
Inkino yera: Magenta, Magenta, Tsvuku, Dzvuku, Dzvuku, Dzvuku
Musoro wechinyorwa: DX5 Epson L800
Kunyanya kudhinda: 111s kweA4 Photo size
Max Print Sarudzo: 5760 * 2880dpi
Max Printing size: 330mm * 430mm
Zvishandiso: Teshi, bhegi, shangu, sock, hats, magasi, silika, kamba, shati nezvimwewo.
1. Mubvunzo: chii chako MOQ?
A: MOQ yedu inotanga 1.
2. Q: Zvakadini neOEM yako?
A: Kuenzaniswa neOEM & ODM yakagamuchirwa inogamuchirwa.
3. Q: Zvakadini neDIVIVERY?
A: Mazuva maviri apera mushure mekunge tibhadharwa.
4. Q: Ndeipi nzira yekuendesa inowanika?
A: Negungwa, nemhepo. Paunosarudza.
5. Q: Chii chaunoshandisa mishonga yekudhinda warraty uye rubatsiro rwekambani?
A: Imwe gore waranti yemichina yedu yose.
Pamusoro pekambani yekugadzirwa kwekombiki, shandisa software yako. Injiniya dzedu dzinogona kugadzirisa zvizhinji
matambudziko nokuda kwechiitiko chavo chakafuma.
6. Mubvunzo: Sei ndichifanira kusarudza iwe?
A: Isu tafekitari, tine shungu, twenyanzvi uye tete rinomirira.
Nesu, bhizinesi rako mune zvakachengeteka & mari yako yakachengeteka.
Inonyanya kushandiswa paCD, kero yefoni, girazi regiragi, pcc kadi, ceramic, pen, metal nezvimwe zvakadaro.
Inonyanya kushandiswa pazvokudya, keke, mugg-up, bhisikiti, kofi, mukaka wemukaka, mukombe, chokoti nezvimwe zvakadaro.
Inonyanya kushandiswa pakofi, mukaka wekiti, kunwa mhombwe.
Product Categories : Digital Printer > T shirt Printer
Imeyili kune uyu mutengesi
Mharidzo yako inofanirwa kunge iri pakati pevanhu 20-8000
Iwe Unogonawo Kuda
Printer Eva Foam Best Best Bata Ikozvino
Mutsika Tshirt Printing Machine Bata Ikozvino
Flatbed Blank T Shirts printer machine Bata Ikozvino
Eva Foam Printing Machine Bata Ikozvino
Zvimwe zviri muInquiry Basket
T-Shirt Printer Guangzhou Dtg A3 T-Shirt Printer T-Shirt 3d Printer T-Shirt Printer Machine T Shirt Printer Machine T Shirt Printer A3 T Shirt Printer KwaKotoni 3 T Shirt Printer
Musha Products Nezvedu Contact Tags Index Sitemap
Copyright © 2019 Shenzhen Refinecolor Technology Co., LTD. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.